आफ्नै बाबुले घर खर्चको लागि नजिकै बसेकी छोरीलाई २२०० डलरमा बे’ चिदिए – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८ समय: १३:०४:४४
आसिफ खान तुर्क – म पाकिस्तानको पेसावार सहरमा बसेर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको छु। छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले मानवीय संकटको आभाष दिन्छ।
गत साता मात्र बीबीसी, सिएनएनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चरम गरिबीले गर्दा अफगानिस्तानका विपन्न परिवारले छोरीहरु बेचेको कथा प्रकाशित भए। त्यहाँको बाद्गिस प्रान्तको एक परिवारले खानेकुरा किन्ने पैसा जुटाउन नौ वर्षीया बालिकालाई बेहुलीका रुपमा ५५ वर्षीय व्यक्तिलाई बेचेको थियो, जुन कथा हृ’दयवि’दारक थियो। विवाहको नाममा ती बालिकामाथि कति च’रम शो’षण भयो होला, त्यसको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।
सात जनाको परिवारका लागि छाक जुटाउन कुनै उपाय नभएपछि सो परिवारले ती बालिकालाई बेचेको जनाएको छ। बेचिएकी ती बालिकामाथि अब परिवारको कुनै हकअधिकार छैन। ५ सय अमेरिकी डलरमा बेचिएकी ती अबोध बालिकाले अनेक अत्याचार र पी’डा खपेर जिन्दगी बिताउनुपर्ने निश्चित छ।
तलिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था त’हस’नह’स भएको छ। रोजगारीको कुनै उपाय छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विदेशी निकायको बैंक एकाउन्ट फ्रिज भएको छ। एकाधबाहेक त्यहाँ कुनै पनि विदेशी एजेन्सीको त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन।
तालिवानलाई अझै उन्माद छ, सरकार चलाउने कुनै तौरतरिका थाहा छैन। सरकारी ढुकुटी गो’लिग’ठ्ठा र ब’न्दुक’मा खर्च भएको छ। केही काम गर्छु भन्नका लागि पनि कि त सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ, कि त विदेशी निकायले पत्याउनुपर्छ। यी दुवै अवस्था अफगानिस्तानमा छैन।
अहिलेसम्म तालिवानले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथसहयोग पाएको छैन। कुनै पनि देशले तालिवान सरकारको समर्थन गरेका छैनन्। यतिसम्मकि सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश पाकिस्तानले पनि तालिवान सरकारलाई समर्थन जनाएको छैन। लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विपक्षमा रहेको तालिवान सरकारले यस्तो समर्थन पाउने सम्भावना पनि न्यून छ। त्यसैले, अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकमा त्रा’स, अन्योल र द्विविधा रहेको छ।
त्यहाँ अहिले खाद्यान्न सं’कट ग’हिरो बन्दै गएको छ। अफगानिस्तानका करिब १ करोड मानिस च’रम भोकमरीको समस्यामा रहेका अनुमान छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, त्यहाँका विपन्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गले पनि खाद्य सं’कटको सामना गरिरहेका छन्।
म पाकिस्तानमै बसेर अफगानिस्तानमा भएका घटनाको ‘अपडेट’ नियमित लिइरहेको छु। तीन महिनाअघि तालिवानले सत्ता ह ‘त्या’एपछि त्यहाँ दिनानुदिन संकट चुलिँदै गएको छ। त्यहाँ काम गर्ने स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारलाई ज्यादै ठूलो जोखिम छ। ज्यानै जाने ख’तरा देखिएपछि अधिकांश पत्रकारले सक्रिय पत्रकारिता छाडेर पलायन भएका छन्। तालिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा एक जना पत्रकारको ह’ ‘त्या हुनुका साथै ३० जनाभन्दा बढी पत्रकारमाथि हा’तपा’त तथा हिं’सा’त्मक घटना भएका छन्।
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने स्थानीय पत्रकारले अफगानिस्तानमा भएको दयनीय अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न आनाकानी गर्छन्। त्यहाँ तालिवानले गरेको कतुर्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आयो भने पत्रकारको ज्या’न नै जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यही भएर पनि पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा च’र्किएको भोकमरीको समस्या, तालिवानले महिलामाथि जारी गरेको क’डा कानुनलगायत विभिन्न विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा थोरै मात्र समाचार पढ्न पाइन्छ।
अहिले अफगानिस्तानमा रहेका नागरिक अनिश्चयको भूँमरीमा त’ड्पि’एका छन्। कति बेला के हुन्छ? केही थाहा छैन। तालिवान सरकारले देशलाई कता लगेर भ’ड्खा’लोमा जा’क्ने हुन् कि भन्ने सं’शय छ। नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई ब’न्ध’क बनाइएको छ।
केही दिनअघि एकजना अफगानी साथीसँग कुरा भएको थियो। मैले त्यहाँको के छ खबर? भनी सोधेको थिएँ। अन्यमनस्क भावमा उनले भन्यो–के खबर हुनु र, जिन्दगी अनिश्चितताको भुँ’मरीमा फ’सिरहेको छ। त्यसपछि मलाई उनीसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने ‘मु’ड’ चलेन। मैले मनमनै प्रार्थना गरेँ–अफगानी नागरिकले यो दुर्दिनबाट छिट्टै मुक्ति पाऊन्।
यी अभागी बाबु खर्च धान्न नसक्दा २२ सय डलरमा ९ बर्षिया पार्वाना लाई ५५ वर्षीय कुर्वानलाइ बेचिदिए ।
तालिवान शासित अफगानिस्तान आर्थिक सं’कटमा फस्दै जाँदा मुलुकका विभिन्न भागमा प्रतिबन्धित प्रथाले पुनः टाउको उठाउन लागेको छ। परिवारका लागि खर्च जुटाउने नाममा विवाहका लागि बालिका बेच्ने प्रथा फेरि सुरु भएको पाइएको छ। पछिल्लो महिनामा गरिबी र भोकमरीसँग जुधिरहेका अफगान परिवारले जीवन धान्नका लागि पैसा जुटाउन विवाहको नाममा कलिला बालिका बेच्न बा’ध्य भएको जनाएका छन्।
Last Updated on: January 28th, 2022 at 1:04 pm